Guddiga Dhaqaalaha Qaranka oo warqad furan u diray Madaxda DFS iyo kuwa DG – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 9 April 2021
Warqad furan oo Guddiga dhaqaalaha Qaranka ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida looga bixi karo ismari waaga doorasho ee dalka ka taagan.
Guddiga ayaa sheegay inuu aad kaga walaacsanyahay ismarin waaga doorasho ee u dhaxeeya madaxda dowladda Federalka iyo kuwa maamul goboleedyada, xaaladda dhaqaale ee dalka iyo amni xumadi ka taagan wadanka.
Guddiga Dhaqaalaha Qaranka ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida iney isugu imaadaan miiska wadahalka islamarkana ay xaliyaan khilaafka u dhaxeeya si dalka uu u golo doorasho loo wada dhanyahay.
Hoos ka akhriso qoraalka ay u direen madaxda Soomaalida
NEC OPEN LETTER EGN